Taliska AMISOM oo ka hadlay dadka lagu dilay Magaalada Marka – STAR FM SOMALIA
Taliska Amisoma ee Somalia ayaa ka hadlay dhacdo ciidankooda ay ka geysteen Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose, halkaasi oo ay ku dileen dad shacab ah.
War kooban oo kasoo baxay Taliska ciidamada Midowga Afrika ee Amisom, ayaa lagu sheegay inay Amisom eegayso wararka la xiriira dhacdooyinka laga soo sheegaayo Magaalada Marka ee ciidanka Amisom inay geysteen la sheegaayo.
“Amisom waxay eegaysaa wararka la xariira dhacdada Marka.” sidaa waxaa lagu qoray Bogga twitter-ka ee Ciidamada Amisom.
Ciidamada Amisom ayaa shalay gabal dhicii waxa ay Magaalada Marka ku dileen dad shacab ah, kadib markii qarax lagula eegtay Magaaladaasi.
Dadka Amisom ay laayeen ayaa waxaa ku jira Aabe dhalay afar caruur ah iyo isaga iyo caruurtiisa waa ay dileen, kadib markii rasaasta ay fureen markii hore ay ku dhacday Aabaha,kadibna caruurta ay u soo gurmadeen, sidaasina ciidanka Amisom ay ku laayeen caruurta.
Bishii July ee aan soo dhaafnay ciidamada Amisom waxa ay dad shacab ah ku laayeen Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose, dadkaasi ayeey Amisom ku sheegeen inay ahaayeen Shabaab.
Shacabka Magaalada Marka ayaa aad uga cadheysan falalka joogtada ah ee ciidamada Amisom ay ku laynayaan dadka Magaalada ku nool.
Amisom ayaa marka qarax Magaalada Marka lagula eegto waxa ay caado ka dhigteen inay furaan rasaas aan loo meel dayin oo dhibaateysa dadka shacabka ah.
Maamulka Jubbaland oo maanta ansaxiyay Dastuurkii Lagu Dhaqi Lahaa(Daawo Sawirada)